» ‘रुदाने’को टिजर सार्वजनिक
‘रुदाने’को टिजर सार्वजनिक
१५ आश्विन २०७८, शुक्रबार ०७:१६
‘चार माना माटोसँग
तेरो नाता पर्‍यो भनेर
दोस्ती सौती गर्‍यो भनेर
बसिस् कैद गमलामा
सिङ्गै पृथ्वीलाई छाडेर ?
को थिए रुदाने ? उनी के भन्न चाहन्थे ? के गर्न चाहन्थे ? आजसम्म यी प्रश्नको जवाफ खोजिएन । खासमा रुदाने एक अजीव मान्छेको नाम हो । उनी विद्रोही थिए । जब्बर थिए । दृढ थिए । उनको खास नाम, रुपचन्द्र विष्ट ।
‘थाहा’ आन्दोलनको प्रणेता हुन् उनी । रुदानेले अनेक जीवन बाँचे । खासमा उनी क्रान्तिकारी थिए । दार्शनिक, साहित्यकार, कवि थिए । उनी खेलाडी थिए । आरोही थिए । वास्तवमा रुदानेलाई एउटै पाटोबाट मात्र हेर्न वा बुझ्न सकिदैनथ्यो । त्यसैले उनी एक रहस्य बने ।
उनी रुदानेको जीवन–चरित्रमा आधारित चलचित्र बनेको छ, रुदाने–विद्रोहको नेपाली नाम । छायांकन भएको लामो समयपछि चलचित्रको टिजर सार्वजनिक भएको छ । करिब दुई मिनेट लामो टिजरमा रुदानेको चरित्र–चित्रण गरिएको छ । टिजरमा रुपचन्द्र विष्ट अर्थात् रुदानेले बाँचेको समय र परिवेश देख्न सकिन्छ ।
रुपचन्द्र विष्टको वायोपिकलाई अमित किशोर सुवेदी र विकास ढकालले निर्देशन गरेका छन् । यसमा दिव्य देवले रुदानेको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । उनीसँगै नम्रता श्रेष्ठ, रवि गिरी, सुभाष गजुरेल, अम्बर सुवेदी, सरोज अर्याल आदिले अभिनय गरेका छन् ।
को थिए रुदाने ?
रुदाने वास्तवमा एक सम्पन्न परिवारमा जन्मिएका थिए । भनिन्छ, उनलाई भौतिक सुख सुविधा पुग्दो थियो । उनीसँग त्यसबेला आवश्यक सबै भौतिक घर, गाडी सबै उपलब्ध थियो । तर, यी सबैकुरा त्यागेर उनी समाज सुधारका लागि निस्किए, झुत्रे–झाम्रे भएर । उनी देश र जनताका लागि वास्तवमै केही गर्न चाहन्थे ।
वि.सं. २०२९ र ३० सालतिर उनले थाहा आन्दोलन शुरु गरे । रुपचन्द्र र उनका सहकर्मीहरु चट्टान, भित्ता, रुखदेखि खाली कागजमा समेत थाहा लेख्दै हिँडे । थाहा आन्दोलन वास्तवमा सर्वसाधरणमा जागरण र चेतना ल्याउनु थियो । उनीहरुमा सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक परिवर्तन ल्याउनु थियो ।
उनको जन्म मकवानपुरमा भएको थियो । सोही क्षेत्रबाट उनले समाज सुधारका थालनी गरे ।